Ny tontolon' IkalaFanja: avril 2015
33 taona aho ity.
Ohatran'ny mahavariana ahy, toa tsy tsaroako niaina lava be toy izany akory aho tamin'ny fiainako anefa tsy azoko lavina satria vao avy nankalaza ny tsingerin-taona naha-33 taona ahy izahay tamin'ity volana aprily ity.
Fahatsiarovana mitambolona irony fahazaza no tena tiako rehefa tonga ny fetiko fony aho vao niala ny tokantranon'i Dada sy i Neny. Satria fony aho mbola zaza dia tsy adinon'i Neny ny manao mofomamy ho asiana labozia hotsofina hankalazana ny tsingerin-taonako sy ny zokiko lahy (i Samoela), izay samy daty mitovy no nahateranay na dia 3 taona aza ny elanelanay. Fahatsiarovana mamy izany taloha, satria andro miavaka nahazoana fanomezana ihany koa... Natsiro ny fahiny.
Tany amin'ny taona 2004 tany ho any angamba (angamba satria tena tsy tsaroako hoe taona firy) izy izay no maty i Neninay (matin'ny homamiadana). Nanomboka teo, tsy tiako nankalazaina loatra intsony ny andro fetiko, satria io daty io no nandevenana ilay reniko. Iza intsony no hanao mofomamy ho ahy eo? Iza intsony no ahatsiaro hanome fanomezana ho ahy eo?
Izahay moa dia fianakaviana tsy dia nanan-katao, sady maro an-trano tetsy an-daniny, fa hafa ihany i Neny ry zalahy, nahay nampifaly teny, tsy adinony izany fanomezana izany, hainy loatra fa tsy voatery handany vola be vao hampitsiky ireo tiany.
Asa nahoana fa izao aho efa 33 taona, fa tsy misy andro tsy ilako iny reniko iny, matetika aho latsaka tomany, nahoana no dia izao no sedra eto an-tany? Midradradra amin'ny toerana mangiana, raha mba azoko natao, na dia iray minitra monja, hamihina an'i Neny.
Dia lasam-betsovetso eto indray aloha koa inona?
Fa na izany aza, tsy irery aho eto an-tany fa mbola banga tsy ho voatototra iny toerana iray iny ato am-poko,
very.... mampihomehy kely fa tsy tadidiko ny tena anton-dahatsoratro :)
lasa vinany teto aho dia lasana ihany koa ilay tena aingam-panahy nanokafako ity pejy anio ity
zary lasa nizarako ny tsiahy sy ny fitiavako ny reniko, angamba aho te-haneho fa mbola zaza be ato anatiko ato na dia nitombo taona be aza. Te hamita-tena.
aleo ianareo avelako aloha fa ndrao tofoka, ho zary zendana ahita ahy hilofika amin'izato tsiahy mampangotsoka ahy.
hiverina tsy ho ela aho hitafa sy hiresaka
fa izao aloha:
Publié par Ikala Fanja à 14:41 13 commentaires:
Maninona moa e? Maninona raha fongarina hatreo ny fijerena ny hafa dia mba mijery indray ny soa sy ny tsara izay tsy misy mpanana afatsy izaho irery? Satria mijery ny manodidina aho, toa sambatra ery i Ranona satria manana an'izato sy izato, sambatra loatra i Anona iry satria tsara tarehy, sady manga feo no manan-talenta no .... Eo dia variana mampitaha eo, ary izaho mba manana inona? 😞 dia valaka sy kivy saina eo.
Anefa vao ovaina ny fomba fijery dia lasa indro feno tsiky miteny irery: "Hay sambatra aho fa manana ANAO". Hay sambatra aho fa manana an'izao sy izao... Andray, hay ve e? Nahoana no tsy hitako raha tsy izao? Jamba loatra, nanampi-maso variana nitazana ny hafa ka zary tsy nahita ilay fahasoavana teo ampela-tanana.
Anio aho hizara ny fahasambarako, izay tsy miavaka akory, fa nahatsapako fahasambarana teo amin'ilay fotoana niainako azy.
Anio aho nisakafo maraina, fa naninona no tsaroako tampoka fa sambatra aho? Satria any ho any, maro ireo tsy mba manana anjara amin'izany, satria any ho any, misy no mangahiahy, raha mba misy azo arapaka lahy 😞.
Ity volana ity no nahazoako ity ranomanitra ity, fanosotro matetika, ary faran'izay mahasambatra ahy ny mamofona ny tenako isaky ny manao azy aho. Hanitra malefaka, mitondra ahy anaty fahasambarana tsy misy pentina. Sambatra aho, satria manana asa, manana fidiram-bola ahafahako mividy izay tiako. Sambatra aho fa mahay mankafy izay eo ampelatanako.
Omaly tolak'andro, nafana be ny andro. Indro izaho sy ny bokiko, naka toerana malomaloka, naka fy ny tontolo, sambatra aho satria misy ny masoandro, sambatra aho nanana fotoana nakana aina. Tsy nisy afatsy izaho irery, nanadino ny taraina.
Izany hasambarana rehetra izany, afaka tsy hitako raha variana nijery ny hafa aho, raha tsy nitodika kely nijery ny tena izaho sy izay anjara fahasoavako.
Zaraiko aminareo anio, satria tiako mba ahatsapa fahasambarana koa ianareo. Teny nomena ahy ity nahasoa ahy ka indro zaraiko ahasoa anareo koa izao: "ampy ahy ny fahasoavaNao"
Naoty: lahatsoratra ataoko ety an-dalana ity nefa tsy andriko ny hizarana azy koa dia miala tsiny aloha fa mbola tsy vita kaly ny endriky pejy 😉
Publié par Ikala Fanja à 03:38 8 commentaires:
Publié par Ikala Fanja à 06:08 7 commentaires: